Ny handraisam-bola ny asa atao fanomezana ra in Taibao Group - China Shandong Zhongbaokang Medical
Jona 12,2017, Taibao Group compined Zibo Ra Center fanentanana mba manome rà, mitontaly 220 mpiasa nandray anjara tamin'ny fanomezana mavitrika. Tamin'ny 8:30 maraina, ny rihana voalohany Taibao Group mpiasan'ny hotely fisakafoana nivadika ho fanomezana ra efitrano vonjimaika, ny toerana dia vaky ho fifampidinihana faritra, faritra tratra, ra faritra sy ny faritra hafa. Mihoatra ny am-polony mitondra ra mpitsabo mpanampy matihanina fitiliana sy ny ra fanangonana fitaovana mba hanomboka ny asa. Ao amin'ny asa, Taibao Group Filohan'ny Gong Duanzhou no nitarika ny handraisam-bola fanomezana ra ka nanao hoe: fanomezana asa ny ra no nokarakarain'ny Taibao Group in-dimy. Tamin'ity indray mitoraka ity, mihoatra ny 500 no mpiasa mazoto fampiharana valiny, ary farany dia naka avy ny sasany amin'ireo mpiasa izay mifanentana fepetra handray anjara amin'ny fanomezana ra handraisam-bola ity. Handraisam-bola ny fandraisana anjara amin'ny fanomezana ra tsy vitan'ny hoe mampitombo ny fitiavana sy ny andraikitry ny mpiasa, mitarika olona maro kokoa hahafantatra sy handray anjara amin'ny fanomezana ra handraisam-bola, fa koa ny manampy olona maro izay mila fanampiana. Isika vonona ny handamina izany asa manan-danja toy ny fiaraha-monina mandray andraikitra orinasa. Tamin'io andro io ihany, Taibao Group, mitontaly 220 be fiahiana ny mpiasa an-tsitrapo nandray anjara tamin'ny hetsika fanomezana ra, ny fitambaran'ny boky ra tonga efa ho 60000 ml. Rehefa nifarana ny fanomezana ra, mpiasa koa efa nandray ny fahatsiarovana nomen'ny afovoan-tanàna ra sy ny fihinana menaka, atody sy sakafo hafa fanampin-tsakafo nomen'ny Taibao Group.